Kana zvasvika kune Ιστοσελίδα Φιλοξενία kune zvakawanda zvakasiyana zvingasarudzwa zviripo. Imwe neimwe ine yavo αξίες, dzakasiyana mumhando uye mutengo mapenji. Nhasi tichave tichitora tarisa kuVirtual Private Server (VPS) yekutambira.
2 Yakagoverwa vs VPS εναντίον Akazvitsaurira Server Hosting
2.2 Αφιερωμένη φιλοξενία
VPS inomiririra Virtual Private Server. Ένα VPS inzvimbo yakasarikwa pane seva ine maitiro eese sevha pachayo. Izvi zvinoreva kuti iine iine yayo Chekushandisa System (OS), zvishandiso, zviwanikwa, uye nekumisikidza. Zvese izvi zvirimo mukati meimwe server rine simba. Imwe neimwe sevha inogona kuva neakaundi akawanda eVPS pazviri.
Tekinoroji yeVirtualization inoongorora sevha yakazara uyezve inokamura zviwanikwa pakati peakaundi akasiyana zvichienderana nezvakabhadharwa nevaya λογαριασμός. Semuenzaniso, kana sevha ine 128GB ye RAM, inogona kupatsanura iyo mumativi maviri kana anopfuura.
Mumwe nemumwe ane λογαριασμός anozopihwa huwandu hwe RAM sekutsanangurwa kwavo muchibvumirano chekubata. Izvo zviwanikwa zvakagoverwa kune imwe neimwe λογαριασμός ndezve λογαριασμός iyoyo uye hazvizobatwe mukati kana mamwe maakaundi achida kana kushandisa zvimwe.
Yakavimbiswa zviwanikwa – Μνήμη, Inogadzirisa nguva, kuchengetedza, nezvimwe hazvizombofa zvakagoverwa.
Zviri nani saiti kuchengetedza – Webhusaiti yako (s) ichaitirwa munzvimbo iri kwayo yoga. Kana chinhu chipi zvacho chikasarasika chikaitika kuaccount yemuvakidzani wako, hazvinei newe; γεια
Ευελιξία βαθμού Yakakwira – Iwe Unowana σε επίπεδο διακομιστή rekutonga masimba akadai sekuwana midzi, sarudzo yeOS, nezvimwe.
Επεκτασιμότητα yekushandiswa kwenguva refu kwenguva refu
Yakagoverwa vs VPS εναντίον Akazvitsaurira Server Hosting
Kugoverwa kugoverana kwakafanana newe uri kugara mukamuri in shamwari dzakawanda. Zvinoreva kuti iwe unofanira kukodzera munzvimbo imwe chete uye iwe unofanira kuparadzanisa mari yezvinhu zvakasiyana nokuti ndizvo inotengesa uye inodhura.
Nekudaro, kuve nevanhu vakati wandei kugoverana nzvimbo yakafanana zvinoreva kuti panofanira kuve paine imwe βαθμό yekupa nekutora. Zviwanikwa zvinoda kugoverwa (semuenzaniso, vanhu vashanu vachitenderera kuti vashandise imba yekugezesa).
Izvi zvinoreva zvakare kuti izvo zvinokanganisa imwe shamwari zvinokubata iwe futi. Kana Mumwe wevanhu vachigovana nzvimbo iyo ine furu – iwe ungatapukirwa zvakare. Zvese zviri mukamuri iyoyo zvinofanirwa kugoverwa pakati pewe (zvinonzwika zvisina hutsinye, handizvo;).
VPS Hosting Providers: InMotion Hosting, TMD Hosting, BlueHost
Αποκλειστικός διακομιστής που φιλοξενεί yakaita kuva muridzi weimba. Iwe wakasununguka kutamira chero kupi zvako mukati meimba yako yaunoda. zvisinei, iwe unofanirwa kuribhadharira chikwereti uye zvikwereti zvingadhura.
Saizvozvo, διακομιστής mune chaiyo yakazvitsaurira, wewe unobhadhara kune yese sevha haina kugoverwa nemumwe munhu. Iwe unozowana kudzora kwakakwana pamusoro peese masevhisi. Nehurombo, iyo zvakare yakanyanyisa kudhura yekusarudza sarudzo uye inoda humwe hunyanzvi hwekugadzirisa.
Iyo inowanzoshandiswa nevaya vane mawebhusaiti vane zvakananga zvinodiwa. Αυτό το inogona kusanganisira kukwanisa kubata yakakwira yewebhu traffic kana yakawandisa kuchengetedza zvinodiwa.